Ifulethi elihle futhi elithokomele e-Casas-Ibáñez - I-Airbnb
Ifulethi elihle futhi elithokomele e-Casas-Ibáñez
Casas-Ibáñez, Castilla-La Mancha, i-Spain
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Isabel
U-Isabel Ungumbungazi ovelele
Kuyifulethi elincane nelithokomele elisenkabeni yedolobha futhi lisondelene kakhulu nazo zonke izinsiza, endlini eyingqophamlando eneminyaka engaphezu kweyi-100 esanda kulungiswa. Ifulethi lisendaweni efinyeleleka kalula futhi litholakala kahle kakhulu, njengoba liseduze nePlaza de la Iglesia del Pueblo kanye no-N322.
Futhi, iCasas-Ibañez iseduze kakhulu namadolobhana anjenge-Alcalá del Jucar neJorquera, kanye neValle del Cabriel.
Iphrojekthi yokunikezela le ndlu kwezokuvakasha yasungulwa ngemuva kokulungiswa kwendawo, indlu endala kagogo nomkhulu, okwenza sibeke isifiso esikhulu ukuze izihambeli zijabulele ukuhlala kwazo sengathi zisekhaya.
Iyindawo ethule kakhulu futhi emaphakathi, elungele labo abafuna ukunqamula umkhuba futhi bavakashele idolobha ngaphandle kokuhamba amabanga amade, yingakho ukunethezeka kwayo.
Kungakhathaliseki ukuthi badinga ukuba ngibaqondise edolobheni futhi ngibanike izikhombisi-ndlela, noma uma kuvela isenzakalo esingalindelekile, ngizibeka othandweni lwabo ngokuphelele, nganoma yini abayidingayo.
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$1050.
Hlola ezinye izinketho ezise- Casas-Ibáñez namaphethelo